Neefsashada Hawada, Kaniisadda Caalamka ee God Switzerland (WKG)
Dhawr sano ka hor, majaajiliiste majaajiliiste oo caan ku ahaa hadaladiisa dhibka leh ayaa u dabaaldegay dhalashadiisa 91-naad. Munaasabadda ayaa isu keentay dhammaan asxaabtiisa iyo eheladiisa, waxaana sidoo kale si wanaagsan uga soo qeybgalay wariyeyaasha wararka. Intii lagu jiray wareysiga xafladda, su’aasha ugu badan ee la saadaalin karo ama ugu muhiimsan ee isaga loogu talagalay ayaa ahayd: "Yaad ama maxaad u aragtaa noloshaada dheer?" Majaajiliiste ayaa ugu jawaabey si kadis ah: "Neefsasho!" Kumaa diidi kara?
Waxaan oran karnaa wax la mid ah xagga dareen ahaaneed. Sida nolosha jir ahaaneed ay ugu tiirsan tahay neefsashada hawada, sidoo kale nolosha nolosha oo dhan waxay kuxirantahay Ruuxa Quduuska ah ama "neefsashada". Ereyga Griigga ee ruuxa waa "pneuma", oo loo tarjumi karo sida dabaysha ama neefta.
Rasuul Bawlos wuxuu ku sharaxayaa nolosha Ruuxa Quduuska ah ereyadan soo socda: «Kuwa sida jidhka u socdaa waa dad garasho leh jidhka; laakiin kuwa ruuxa lihi waxay ku jiraan ruuxa. Laakiin jidhka binu-aadmiga waa dhimashada, iyo ruuxa in la noolaado waa nolosha iyo nabadda » (Rooma 8,5-6).
Ruuxa Qudduuska ahi wuxuu ku dhex nool yahay kuwa rumaysta injiilka. Ruuxaani wuxuu midho dhalaa nolosha rumaystaha: «Midhaha Ruuxu waa jacayl, farxad, nabad, dulqaadasho, roonaan, roonaan, roonaan, iscelin, wanaag; oo ka soo horjeedda sharcigaas oo dhan (Galatiya 5,22: 23).
Midhahan kaliya maahan sida aan u nool nahay marka Ruuxa Quduuska ahi inagu dhex nool yahay, wuxuu qeexayaa waxa Ilaah yahay iyo sida uu inoola dhaqmo.
«Waxaan garannay oo rumaynay jacaylka Eebbe noo qabo: Ilaah waa jacayl; oo ku alla kii jacayl ku sii jiraa, Ilaah buu ku sii jiraa; Ilaahna isagay ku sii jirtaa isaga. (1 Yooxanaa 4,16). Waxaan halkaan u joognaa inaan soo saarno midhahan, oo aan u noqdo barako kuwa hareerahayaga ah.
Kumaan u nuuxnuuxsanaanaynaa cimrigeenna xagga ruuxiga ah? Neefta neefta Eebbe. Nolosha Ruuxa - noloshu waxay ku noolayd iyadoo la rumaysto Wiilka Ilaah.
Waxaan haysannaa nolol aad u wanaagsan oo abaal marin leh markii Ruuxa Quduuska ahi inagu dhex jiro, kaasoo ah neefsashada ruuxigeenna. Marka waxaan dareemi karnaa nolol iyo xoog.